झरना भन्छिन्–‘छोरीलाई हिट गराउन अनमोललाई लिएकी होइनँ’  Hamrosandesh.com
झरना भन्छिन्–‘छोरीलाई हिट गराउन अनमोललाई लिएकी होइनँ’
दुई दशक भन्दा बढी समयदेखि चलचित्र क्षेत्रमा नायिकाको रुपमा चर्चामा रहेकी झरना थापा अहिले निर्देशक बनेकी छिन् । उनको निर्देशनमा बनेको पहिलो चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ निकै सफल भएको थियो । उनको निर्देशनमा बनेको दोस्रो चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ नयाँ वर्षको अवसर पारेर चैत २९ गतेबाट रिलिज हुदैछ । यो चलचित्रमा नायक अनमोल केसी र नव–नायिका सुहाना थापाको मुख्य भूमिका छ । सुहाना निर्देशक थापाकी छोरी हुन् ।
छोरीलाई चलचित्र क्षेत्रमा किन ल्याउनुभयो ? भन्ने प्रश्नमा झरनाले भनिन्–‘मैले लामो समय बिताएको यो क्षेत्रमा मेरो छोरीले पनि काम गरोस् भन्ने चाहाना थियो । तर, उसले यति चाडै नै आउने रहर गरेकी थिइन ।’ सबै योजना बिना नै भयो ।’ चलचित्रको घोषणा गर्दासम्म पनि सुहानालाई आफू चलचित्रमा काम गर्दैछु भन्ने थाहा थिएन । झरना भन्छिन्–‘हामीले सुहानालाई सरप्राइज दिएका थियौँ ।’
सुहानाको चलचित्रमा काम गर्ने कुनै सोच पलाएको थिएन । चलचित्रमा काम गर्ने भनेपछि सुहानाले झरनालाई प्रश्न गरेकी थिइन्–‘यति छिट्टै किन ?’ झरनाले नै सुहानालाई फकाएर चलचित्रमा काम गर्न राजी गराइन् । सुहानाले चलचित्रमा काम गर्नु अगाडि फोटोसुट पनि गरेकी थिइनन् । झरना अगाडि भन्छिन्–‘चलचित्रका लागि खासमा सुहाना तयार नै थिइनन् । तर, मैले तिम्रो लागि सही समय आएको छ । सायद, यहीबाट नै तिम्रो भाग्य खुल्न पनि सक्छ भनेपछि उनी काम गर्न राजी भइन् ।’ चलचित्रमा सुहानाको जोडी नायक अनमोल केसीसँग जोडिएको छ । अनमोल अहिलेका नम्बर एक कलाकार हुन् । उनको क्रेज दर्शकमा अत्याधिक छ । ‘के आफ्नो छोरीलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न अनमोलसँग जोडी बनाउनु भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा झरनाले भनिन्–‘ म त यो कुरालाई सोझै नकार्छु । मैले पहिला सुहानालाई लिएर उसलाई हिट गर्न अनमोललाई लिएकी होइनँ । अनमोल छनोट भएपछि मात्रै सुहाना चलचित्रमा भित्रिएकी हुन् ।’
झरना यो चलचित्रमा सुहानालाई अभिनय गराउनुको मुख्य कारण निर्माता भूवन केसी र वितरक मनोज राठी भएको बताउँछिन् । ‘मैले त सुहानाको पढाई सकियोस् अनि मात्र यो क्षेत्रमा ल्याउने सोच बनाएकी थिएँ । तर, भुवन दाई र मनोजजीले सुहानालाई खेलाउनुपर्छ भनेपछि मात्रै सुहानाले काम गर्न तयार भएकी हुन् ।’ चलचित्रमा अनमोल भएका कारण सुहानालाई धेरै सहयोग भएको भने झरना स्विकार्छिन् । उनी भन्छिन्–‘अहिलेको स्टार कलाकारसँग जोडी हुँदा सुहानालाई धेरै कुरामा प्लस भएको छ । त्यो मान्न म तयार छु ।’
चलचित्रको कथा तथा पटकथा तयार गरिरहँदा भने झरनाले चलचित्रको पात्रमा अनमोल र सुहाना कसैलाई देखेकी थिइनन् । उनको दिमागमा नयाँ कलाकार लिएर काम गर्ने सोच पलाएको थियो । ‘अनमोल र सुहाना त मेरो दिमागमा आएका पनि थिएनन् । तर चलचित्रका लागि उनीहरु नै जुरेको रहेछन् ।’
सुहानाको कामबाट निकै सन्तुष्ट छिन् झरना । उनले भनिन्–‘आफ्नो छोरी हो, राम्रो भन्यो भन्लान् । तर, जब चलचित्र रिलिज हुन्छ नि सबैले उसको कामको तारिफ गर्नेछन् ।’ अहिले चलचित्रको सार्वजनिक टिजर र गीतबाट सुहानाको निकै तारिफ भइरहेको छ । छोरीले पाएको प्रतिक्रियाबाट झरना पनि दंग छिन् । ‘सुहानाले मेरो सफलता भन्दा माथिको सफलता पाउने छिन्’, झरनाको विश्वास बोलिरहेको छ ।
धेरैले गीत र टिजर हेरेर सुहानालाई झरनासँग दाँजिरहेका छन् । सुहाना आफ्नो आमा झरना जस्तै देखिएको प्रतिक्रियाहरु पनि आइरहेका छन् । यसमा पनि खुसी नै छिन् झरना । ‘उहाँहरुले मलाई याद गर्नुभएको रहेछ र त सुहानामा पनि मलाई देख्नुभयो’, झरनाले भनिन्, ‘सुहानाले दर्शकलाई मेरो न्यास्रो मेटाइदिनेछिन् ।’
सुहाना ‘ए मेरो हजुर ३’ को रिलिज पश्चात् पुनस् अमेरिका फर्किनेछिन् । अब भने ब्याचलर सकेर मात्र काम गर्ने सुहानाको चाहाना छ । त्यो चाहानालाई झरनाले पनि स्विकारेकी छिन् । झरना भन्छिन्–‘अब भने उसले पहिले आफ्नो पढाई सक्नेछिन् । त्यसपछि हाम्रो व्यानरमा मात्र काम गर्नु पर्छ भन्ने छैन । राम्रो टिम र राम्रो व्यानरबाट अफर आएको खण्डमा हामी उसलाई रोक्दैनौ ।’ झरना सुनिइन् ।